အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ (ဆီးဂိမ်းစ်) တွင် အောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့သည့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းနှင့် အမျိုးသား ယူ-၂၂ ဘောလုံးအသင်းတို့အား Bphone မှ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့ - MySport Myanmar
အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ (ဆီးဂိမ်းစ်) တွင် အောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့သည့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းနှင့် အမျိုးသား ယူ-၂၂ ဘောလုံးအသင်းတို့အား Bphone မှ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့
ပွီးခဲ့သညျ့ အကွိမျ ၃၀ မွောကျ အရှတေ့ောငျအာရှ အားကစားပွိုငျပှဲ (ဆီးဂိမျးဈ) တှငျ အောငျမွငျမှုမြား ရရှိခဲ့သော မွနျမာ့လကျရှေးစငျ အမြိုးသမီးဘောလုံးအသငျးနှငျ့ အမြိုးသား ယူ-၂၂ ဘောလုံးအသငျးတို့ အတှကျ ဗီယကျနမျနိုငျငံမှ ထိပျတနျးစမတျဖုနျး အမှတျတံဆိပျဖွဈသညျ့ Bphone မှ ဂုဏျပွုခြီးမွှငျ့ပှဲ အခမျးအနား တဈရပျအား ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလ ၂၅ ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပပွုလုပျပေးခဲ့ပွီး အဆိုပါ အခမျးအနားတှငျ အသငျး ၂ သငျးလုံးအား Bphone မှ ၎င်းငျး၏ နောကျဆုံးပျေါ စမတျဖုနျးမြားနှငျ့အတူ ဆုကွေးငှမြေားကိုလညျး ပေးအပျခြီးမွှငျ့ခဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါ ဆုခြီးမွှငျ့ပှဲ အခမျးအနားအား မွနျမာနိုငျငံဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ၏ ရုံးခြုပျတှငျ ကငျြးပပွုလုပျပေးခဲ့ပွီး မွနျမာနိုငျငံ ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ အထှထှေေ အတှငျးရေးမှူး ဖွဈသူ ဦးကိုကိုသိနျးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား၊ Bkav မွနျမာမှ General Director ဖွဈသူ Mr. Le Quang Hiep နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား၊ မွနျမာ့ လကျရှေးစငျအမြိုးသမီး ဘောလုံးအသငျးမှ ကစားသမားမြား ဖွဈကွသညျ့ မွတျနိုးခငျ၊ ခိုငျမိုးဝေ၊ ရီရီဦး၊ ဂြူလိုငျကြျောနှငျ့ ခငျမိုမိုထှနျး၊ မွနျမာ့ လကျရှေးစငျ အမြိုးသား ယူ-၂၂ ဘောလုံးအသငျးမှ ကစားသမားမြား ဖွဈကွသညျ့ လှိုငျးဘိုဘို၊ ဝငျးနိုငျထှနျး၊ အောငျကောငျးမာနျ၊ အောငျနိုငျဝငျးနှငျ့ ဆနျးဆကျနိုငျတို့ တကျရောကျခဲ့ကွပါတယျ။
“ပွီးခဲ့တဲ့ ဆီးဂိမျးဈမှာ ကွေးတံဆိပျတှေ အသီးသီး ဆှတျခူးရရှိခဲ့တဲ့ မွနျမာ့လကျရှေးစငျ အမြိုးသမီး ဘောလုံးအသငျးနဲ့ အမြိုးသား ယူ-၂၂ ဘောလုံးအသငျးတို့ကို အခုလို ဂုဏျပွုခြီးမွှငျ့ခဲ့တဲ့ အတှကျ မွနျမာနိုငျငံဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျနဲ့ ဘောလုံးအသငျး ၂ သငျးလုံးကိုယျစား Bphone ကုမ်ပဏီကို ကြေးဇူးတငျရှိကွောငျး ပွောကွားလိုပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ပွိုငျပှဲဟာ ၂ သငျးစလုံးအတှကျ ခကျခဲတဲ့ ပွိုငျပှဲတဈရပျ ဖွဈခဲ့ပမေဲ့ လကျရှေးစငျ ၂ သငျးလုံးအနနေဲ့ ပွိုငျပှဲတဈလြှောကျလုံး ပုံစံကောငျးပွသနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျလညျး ဝမျးမွောကျဂုဏျယူမိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အနနေဲ့ လာမယျ့ပွိုငျပှဲတှမှော ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို ပွသနိုငျဖို့နဲ့ ပိုမိုမွငျ့မားတဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေို ရယူသှားနိုငျ ဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံး ဆကျလကျကွိုးစားသှားမှာ ဖွဈပွီး အခု Bphone က ပေးအပျခဲ့တဲ့ ကူညီထောကျပံ့မှုတှကေ လညျး ဒီလိုစှမျးဆောငျနိုငျဖို့ အထောကျအကူဖွဈစမှော အသအေခြာပါပဲ” ဟု မွနျမာနိုငျငံ ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ အထှထှေေ အတှငျးရေးမှူးဖွဈသူ ဦးကိုကိုသိနျးမှ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
အဆိုပါ အခမျးအနားတှငျ Bphone သညျ စုစုပေါငျး Bphone3Pro စမတျဖုနျး အလုံးရေ ၄၀ နှငျ့ Bphone3စမတျဖုနျး အလုံးရေ ၄၇ လုံးအား ကစားသမားမြားထံ ဂုဏျပွုပေးအပျခဲ့သညျ့အပွငျ မွနျမာနိုငျငံ ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျသို့လညျး မွနျမာငှကေပျြ သိနျး ၅၀ အား ထောကျပံ့ပေးအပျခဲ့သညျ။ “မွနျမာနိုငျငံအတှကျ ကူညီထောကျပံ့မှုတှေ ပွုလုပျသှားဖို့ အမွဲအဆငျသငျ့ရှိနတေဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခု ဖွဈတာနဲ့အညီ Bkav နဲ့ Bphone တို့အနနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံကို စတငျဝငျရောကျလာတဲ့ အခြိနျကတညျးကစပွီး နိုငျငံအတှကျ လိုအပျတဲ့ ကူညီထောကျပံ့မှုတှကေို ပေးအပျခဲ့ပွီး အခုအခြိနျမှာလညျး အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိခဲ့တဲ့ နိုငျငံကိုယျစားပွု ဘောလုံးအသငျးတှအေတှကျ ဆုခြီးမွှငျ့မှုတှနေဲ့ ကူညီထောကျပံ့မှုတှေ ပေးအပျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ မွနျမာ့လကျရှေးစငျ အမြိုးသမီးဘောလုံးအသငျးနဲ့ အမြိုးသား ယူ-၂၂ ဘောလုံးအသငျးတို့ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ အကွိမျ ၃၀ မွောကျ အရှတေ့ောငျအာရှ အားကစားပွိုငျပှဲ (ဆီးဂိမျးဈ) မှာ အကောငျးဆုံးယှဉျပွိုငျကစားခဲ့ကွတဲ့အတှကျ ဝမျးမွောကျမိပွီး နောကျလာမယျ့ ပွိုငျပှဲတှမှောလညျး ဒီထကျ ပိုမိုမွငျ့မားတဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ ရယူသှားနိုငျဖို့အတှကျ အားပေးကူညီပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ” ဟု Bphone စမတျဖုနျးမြားအား ထုတျလုပျသညျ့ Bkav Myanmar ၏ General Director ဖွဈသူ Mr. Le Quang Hiep မှ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
Bkav သညျ ၎င်းငျး၏ နောကျဆုံးပျေါ အဆငျ့မွငျ့စမတျဖုနျး အမြိုးအစားမြားဖွဈသညျ့ Bphone3Pro နှငျ့ Bphone3တို့အား မွနျမာနိုငျငံဈေးကှကျတှငျ ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ဇူလိုငျလ၌ စတငျမိတျဆကျခဲ့ပါတယျ။ Bphone3Pro နှငျ့ Bphone3စမတျဖုနျးမြားတှငျ ထညျ့သှငျးထားသညျ့ အနီးကပျပုံရိပျမြားအား အသေးစိတျ ကွညျလငျပွတျသားစှာ ရိုကျကူးနိုငျသညျ့ အသိဉာဏျမွငျ့မားသော ကငျမရာ၊ IP68 အဆငျ့ရှိ ရနှေငျ့ဖုနျဒဏျ ခံနိုငျစှမျး၊ အဆငျ့မွငျ့ လုံခွုံရေးစနဈနှငျ့ ခိုးယူမှုမှ ကာကှယျနိုငျသညျ့ အဆငျ့မွငျ့နညျးပညာ၊ ဖုနျးမကျြနှာပွငျ၏ အောကျခွတှေငျ မကျြနှာပွငျ အပွညျ့ပါဝငျသညျ့ အဆငျ့မွငျ့ဒီဇိုငျးနှငျ့ အခွားသော အဆငျ့မွငျ့ လုပျဆောငျခကျြမြားသညျ အသုံးပွုသူမြား၏ ကွိုကျနှဈသကျအားပေးမှုမြားအား ရရှိခဲ့ပါတယျ။ Bphone3Pro နှငျ့ Bphone3တို့နှငျ့ပတျသကျသညျ့ အသေးစိတျ အခကျြအလကျမြားအား လလေ့ာလိုပါက https://bphone.com.mm/ နှငျ့ Facebook.com/BphoneMyanmar တို့တှငျ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
Bkav ကျောပိုရေးရှငျး အကွောငျး
Bkav သညျ ဗီယကျနမျနိုငျငံမှ ထိပျတနျး နညျးပညာကျောပိုရေးရှငျး တဈခုဖွဈပွီး ဆိုကျဘာလုံခွုံရေး၊ ဆော့ဖျဝဲလျ၊ စမတျဖုနျးနှငျ့ စမတျ home အစရှိသညျ့ စီးပှားရေးဌာနခှဲပေါငျး ၄ ခု အား လုပျကိုငျဆောငျရှကျလကျြရှိပါတယျ။ အဆိုပါ ဌာန ၄ ခု အနကျ စမတျဖုနျးထုတျလုပျသညျ့ လုပျငနျးခှဲအား Bkav ၏ ကုမ်ပဏီခှဲတဈခုဖွဈသညျ့ Bkav Electronics မှ ဦးစီးလုပျကိုငျလကျြရှိပါတယျ။
ဗီယကျနမျနိုငျငံတှငျ Bkav သညျ လူသိအမြားဆုံး ကုနျပစ်စညျး အမှတျတံဆိပျ ၁၀ ခု စာရငျးထဲတှငျ ပါဝငျလကျြ ရှိပွီး အကောငျးမှနျဆုံးသော ဝနျဆောငျမှုမြားအား အသုံးပွုသူမြားထံပေးအပျလကျြရှိပါတယျ။ ထို့အပွငျ Bkav သညျ Google Chrome, iPhone X ၏ Face ID နှငျ့ Samsung Galaxy S8 ၏ iris recognition အစရှိသညျ့ နာမညျကြျော ဝနျဆောငျမှုမြား၏ အားနညျးခကျြမြားကို ရှာဖှဖေျောထုတျနိုငျခဲ့သညျ့ အတှကျလညျး ကမ်ဘာတဝနျးတှငျ လူသိမြား ထငျရှားပါတယျ။ နောကျပွီး နိုငျငံပေါငျး ၂၃၄ နိုငျငံကြျောမှ အသုံးပွုသူပေါငျး သနျး ၂၀ ကြျော သညျလညျး Bkav ၏ antivirus နှငျ့ မိုဘိုငျးလုံခွုံရေး ဆော့ဖျဝဲလျမြားအား အသုံးပွုလကျြရှိပါတယျ။
ပြီးခဲ့သည့် အကြိမ် ၃၀ မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ (ဆီးဂိမ်းစ်) တွင် အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့သော မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းနှင့် အမျိုးသား ယူ-၂၂ ဘောလုံးအသင်းတို့ အတွက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်း အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည့် Bphone မှ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနား တစ်ရပ်အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် အသင်း ၂ သင်းလုံးအား Bphone မှ ၎င်း၏ နောက်ဆုံးပေါ် စမတ်ဖုန်းများနှင့်အတူ ဆုကြေးငွေများကိုလည်း ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားအား မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏ ရုံးချုပ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်သူ ဦးကိုကိုသိန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ Bkav မြန်မာမှ General Director ဖြစ်သူ Mr. Le Quang Hiep နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာ့ လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်းမှ ကစားသမားများ ဖြစ်ကြသည့် မြတ်နိုးခင်၊ ခိုင်မိုးဝေ၊ ရီရီဦး၊ ဂျူလိုင်ကျော်နှင့် ခင်မိုမိုထွန်း၊ မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် အမျိုးသား ယူ-၂၂ ဘောလုံးအသင်းမှ ကစားသမားများ ဖြစ်ကြသည့် လှိုင်းဘိုဘို၊ ဝင်းနိုင်ထွန်း၊ အောင်ကောင်းမာန်၊ အောင်နိုင်ဝင်းနှင့် ဆန်းဆက်နိုင်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ ဆီးဂိမ်းစ်မှာ ကြေးတံဆိပ်တွေ အသီးသီး ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်းနဲ့ အမျိုးသား ယူ-၂၂ ဘောလုံးအသင်းတို့ကို အခုလို ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ဘောလုံးအသင်း ၂ သင်းလုံးကိုယ်စား Bphone ကုမ္ပဏီကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဟာ ၂ သင်းစလုံးအတွက် ခက်ခဲတဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ရပ် ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ လက်ရွေးစင် ၂ သင်းလုံးအနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်လုံး ပုံစံကောင်းပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ လာမယ့်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသနိုင်ဖို့နဲ့ ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ရယူသွားနိုင် ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမှာ ဖြစ်ပြီး အခု Bphone က ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေက လည်း ဒီလိုစွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမှာ အသေအချာပါပဲ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ဦးကိုကိုသိန်းမှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် Bphone သည် စုစုပေါင်း Bphone3Pro စမတ်ဖုန်း အလုံးရေ ၄၀ နှင့် Bphone3စမတ်ဖုန်း အလုံးရေ ၄၇ လုံးအား ကစားသမားများထံ ဂုဏ်ပြုပေးအပ်ခဲ့သည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်သို့လည်း မြန်မာငွေကျပ် သိန်း ၅၀ အား ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့သည်။ “မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ ပြုလုပ်သွားဖို့ အမြဲအဆင်သင့်ရှိနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်တာနဲ့အညီ Bkav နဲ့ Bphone တို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို စတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ အချိန်ကတည်းကစပြီး နိုင်ငံအတွက် လိုအပ်တဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာလည်း အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု ဘောလုံးအသင်းတွေအတွက် ဆုချီးမြှင့်မှုတွေနဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ ပေးအပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းနဲ့ အမျိုးသား ယူ-၂၂ ဘောလုံးအသင်းတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အကြိမ် ၃၀ မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ (ဆီးဂိမ်းစ်) မှာ အကောင်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြတဲ့အတွက် ဝမ်းမြောက်မိပြီး နောက်လာမယ့် ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်း ဒီထက် ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ ရယူသွားနိုင်ဖို့အတွက် အားပေးကူညီပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု Bphone စမတ်ဖုန်းများအား ထုတ်လုပ်သည့် Bkav Myanmar ၏ General Director ဖြစ်သူ Mr. Le Quang Hiep မှ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Bkav သည် ၎င်း၏ နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်း အမျိုးအစားများဖြစ်သည့် Bphone3Pro နှင့် Bphone3တို့အား မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၌ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ Bphone3Pro နှင့် Bphone3စမတ်ဖုန်းများတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် အနီးကပ်ပုံရိပ်များအား အသေးစိတ် ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်ကူးနိုင်သည့် အသိဉာဏ်မြင့်မားသော ကင်မရာ၊ IP68 အဆင့်ရှိ ရေနှင့်ဖုန်ဒဏ် ခံနိုင်စွမ်း၊ အဆင့်မြင့် လုံခြုံရေးစနစ်နှင့် ခိုးယူမှုမှ ကာကွယ်နိုင်သည့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ ဖုန်းမျက်နှာပြင်၏ အောက်ခြေတွင် မျက်နှာပြင် အပြည့်ပါဝင်သည့် အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းနှင့် အခြားသော အဆင့်မြင့် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အသုံးပြုသူများ၏ ကြိုက်နှစ်သက်အားပေးမှုများအား ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Bphone3Pro နှင့် Bphone3တို့နှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား လေ့လာလိုပါက https://bphone.com.mm/ နှင့် Facebook.com/BphoneMyanmar တို့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Bkav ကော်ပိုရေးရှင်း အကြောင်း
Bkav သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ထိပ်တန်း နည်းပညာကော်ပိုရေးရှင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ စမတ်ဖုန်းနှင့် စမတ် home အစရှိသည့် စီးပွားရေးဌာနခွဲပေါင်း ၄ ခု အား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ ဌာန ၄ ခု အနက် စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းခွဲအား Bkav ၏ ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် Bkav Electronics မှ ဦးစီးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် Bkav သည် လူသိအများဆုံး ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ် ၁၀ ခု စာရင်းထဲတွင် ပါဝင်လျက် ရှိပြီး အကောင်းမွန်ဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုများအား အသုံးပြုသူများထံပေးအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် Bkav သည် Google Chrome, iPhone X ၏ Face ID နှင့် Samsung Galaxy S8 ၏ iris recognition အစရှိသည့် နာမည်ကျော် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အားနည်းချက်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည့် အတွက်လည်း ကမ္ဘာတဝန်းတွင် လူသိများ ထင်ရှားပါတယ်။ နောက်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၂၃၄ နိုင်ငံကျော်မှ အသုံးပြုသူပေါင်း သန်း ၂၀ ကျော် သည်လည်း Bkav ၏ antivirus နှင့် မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး ဆော့ဖ်ဝဲလ်များအား အသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။
MySport Myanmar2020-01-03T18:32:15+06:30January 3rd, 2020|Football, Myanmar Football, News|